ကျွန်တော် ကြိုက်သော Laptop လေး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကျွန်တော် ကြိုက်သော Laptop လေး…
Posted by ကို ထွဋ် on Sep 13, 2014 in Computers & Technology, Know-How, DIY, Opinion - Op-ed | 32 comments
IT Bank... ဂျန်န၀ါရီနောလစ်...
. ကိုယ့်ဘာသာဆို အင်တာနက်မှာပဲ တွေ့ဖူးမှာ… အခုက ရုံးက ဆရာကြီးများက အကောင်းကြိုက်တော့ ၀ယ်ပေးဖြစ်တယ်…
. မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာလဲ ရှိရမယ်… ဘတ်ဂျက်လဲ ကျရမယ်ပေါ့… ကျပါတယ် ကျတာကတော့…
. အခု မြင်နေရတာက Lenovo Flex Series တွေပါ… တော်တော်လေးကို သဘောခွေ့တယ်… ဟီး… တဂျီးဝယ်ပေးရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့…
. ရုံးက ၀ယ်လိုက်တာက Lenovo IdeaPad Flex 14 Core i3 ပါ… ဈေးကလဲ ပါးပါးလေးပါ… ၆ သိန်းတောင် မခွဲဘူး…
. ကောင်းချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့…. မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ… 300 ဒီဂရီ ခေါက်လို့ရတယ်… Tablet လို သုံးလို့ရတယ်…
. တော်တော်ကိုပါးတယ်… ၁ လက်မ မပြည့်ဘူး…
. ပေါ့တယ်… ၅ ပေါင်တောင် မပြည့်ဘူး…
. Window က 8… Touch ကလဲ ကောင်းမှကောင်း…
. တခုပဲ Drive တော့ မပါဘူး…
. Adapter ကတော့ နောက်ပိုင်း Series တွေမှာ ခေါင်းပြားတွေ သုံးလာတာ တွေ့တယ်… ပင်ကောက်တာ ဘာညာ မရှိတော့ဘူးပေါ့…
. မက်စရာရှိသေးတာက ဘက်ထရီပဲ.. တော်တော် ခံတယ် ဂလား… ၉ နာရီလို့တော့ ဆိုထားတယ်… မစမ်းရသေးဘူး…
. တော်ပါပြီ ဒီလောက်ဆိုနော်… များသွားရင် ဟုန်သွားမှာစိုးလို့…
. ပိုစိတ်ဝင်စားရင် ဟော့ဒီလင့် မှာ ရှုပါခင်ဗျာ…
Drive မပါတစ်ခုတည်းနဲ့တင် စိတ်ရှုပ်သွားပြီ မကြိုက်ဘူး
ကိုချိုကြီးကလဲ External တပ်လို့ရတယ်လေ… Screen က အဲလို လုပ်လို့ရတာ ရှားတယ်ဗျ…
ဟုတ်တယ် Drive မပါဘူးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့သွားပြီဗျ
ကောင်းပါတယ်.. ကိုခကြီးရယ်.. အဲလိုတော့ အားမပေးပါနဲ့..
တဂျီး က မင်း ကို Apple Watch ဝယ်ပေးမှာတဲ့။
(အိုင် တော့ ဝပ်ရှ် လို့ မရဘူး။ သူများက အဲ့နာမည် ဦးထားလို့)
ရပါတယ်.. အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှ ဆိုတာထက် ပိုနီးစပ်ပါတယ်…
ခုလောလောဆယ်… M$ ရဲ့ Surface p2 သုံးနေတာ.. ပူကလည်းပူ.. လေးကလည်းလေး..
ပန်းသီးကတော့.. လက်ပတ်နာရီမကလို့.. ခြေပါနာရီထွက်ထွက်.. မ၀ယ်ရေးချ.. မ၀ယ်..။
ကျုပ်ဆီမှာ.. pentium 100MHz NEC laptopလေးတလုံး အခုထိရှိနေသေးတယ်ဗျ..
အမှတ်တရသိမ်းထားတာ.. အထဲမှာ.. win95ရအောင်ထည့်ထားတယ်..။ ခိုင်ထူးသီချင်းတွေလည်းရှိတယ်..။
ဟင်း.. ဒါတောင်.. ကျုပ်ရဲ့ပထမဆုံးလက်ပ်တော့.. 486လေးပစ်လိုက်လို့..။
သိမ်းထားလိုက် တဂျီး.. အခုရှိတဲ့ နှစ်ကို ၇၅ ထဲက နှုတ်လိုက်.. ကျန်တဲ့နှစ်ကို ဆက်သိမ်းနိုင်ရင် သိမ်း.. မဟုတ်ရင် အမွေပေးထား.. နှစ် ၇၅ ဆို အန်းတိတ် စာရင်းထဲ ၀င်ရင် ဈေးတန်းတခုဖြစ်မှာ ကျိန်းသေတယ်..
ဂလောက် ဂလက် …
သူ့ လင့်ခ် မှာတော့ Hard Disk Drive ပါတယ်တဲ့ဗျ။
ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး မိုက်တယ် ပြောရမယ်။
USB 3.0 တစ်ပေါက်ထဲ ပါတာတော့ သိပ် မကြိုက်။ များများ ပါသင့်တယ်။
အခု သုံးနေတာက ကောင်းတော့ ကောင်းပေမယ့် ဝိတ်က လေးတော့ ခရီးတွေ ဘာတွေ သွား သိပ် သယ်လို့ မကောင်းဘူး။
ဒီဟာက touch screen ပါနေတာရယ် ခေါက်ချိုး ချိုးချလို့ ရနေတာရယ် က စားသာနေတာပဲ။
ဒါနဲ့ Mac Book Air 13 inches ဆို ဘယ်လို ကွာမယ် မသိ။
ကျနော် စာဖတ် မှားသွားတယ် ထင်တယ်။ Drive ဆိုတာ CD/DVD drive ကို ပြောတာနေမယ်။ ဆောရီးဗျ။ ညသန်းခေါင် ဆိုတော့ မျက်စိက သိပ် မမှန်တော့ဘူး။
ရပါတယ်.. ဂျက်ရယ်.. ဂဇက်ကလူတွေက ညမှ အတွေ့များတယ်နော်…
ရပါတယ်.. HD i3 မှာ 500 GB ပါ… i5 မှာ 128 GB … USB က တပေါက်မကဘူး..2or3ပါပါတယ်ဗျ…
USB 2.0 ၂ပေါက် USB 3.0 ၁ ပေါက် တဲ့။
အော်.. ဂျက်ရယ်.. စတန်းဒတ်က ၂.0 ပါ.. Next Generation Ex HD တွေမှသာ 3.0 ပါ.. ဒါတောင် 1 Tera လောက်မှပါ.. ဒီတော့ အဆင်ပြေမှာပါကွယ်..
ဆရာသခင်ဂျီး… Dell မှာလဲ2in 1 လက်ပကျွတ်ဗားရှင်းတွေ့ရှိလည်။ ဈေးပိုသက်သာတယ်… ၄၅၀ + ၉% tax. ဒါတောင် ပရောစက်ဆာကို Intel® Celeron® Processor (Dual Core) ထည့်လျင် ၄၀၀ + ၉% tax ပဲရှိသယ်။ သိချဉ်တာ (၁) ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ ဝင်းဒိုးအိပ် အဆင်ပြေလား…။ (၂) အင်တာနက်တက် ကမြင်းဖို့လောက်အတွက် Celeron ပရောစက်ဆာလောက်ဆို ဖြစ်သလား၊ intel ပင်န်တီယံနဲ့ သိပ်ကွာသလား။ (၃) ဝင်းဒိုး8.1 အတွက် M/S office အယင်လို ခိုးထည့်လို့ ဖြစ်သလား။ ကွန်ပြူတာ ပြိန်ညာရှင် မဟုတ်လေဒေါ့ crack လုပ်ထားတဲ့ စီဒီလျှာပြီး အင်စတော လုပ်တာပဲတတ်သယ်။
HDMI™ 1.4a, Multi-media Card Reader, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2), Security slot
0.83″ (21.2mm) / 11.81″ (300mm) / 7.93 (201.5mm)
Composite: 3.07 lb (1.39 Kg) with HD touch screen
မနောက်ပါနဲ့ ဦးကြောင်ရယ်.. ဆရာကြီးတော့ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ..
ဦးကြောင်သိချင်တဲ့ ပထမအချက်.. ၀င်းဒိုး ၈ နဲ့ ဇော်ဂျီ အိုကေပါတယ်.. အခုဆို ၀င်းဒိုးတင်ကတည်းက ဘာသာရွေးရာမှာ မြန်မာကိုပါ ရွေးနိုင်ပါပြီ.. သို့သော် သူ့မှာပါတာက ဂဂျောင်ဖတ်လို့ အင်္ဂလိပ် တမျိုးတည်းရွေးရင် ပိုအိုကေပါတယ်.. ဒုတိယအချက် Celeron နဲ့ ပင်တီယမ် လုပ်ဆောင်ပုံ ၂ ဆကွာပါတယ်.. အင်တာနက်သုံးရုံ Office သုံးရုံနဲ့ Celeron ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်.. သို့သော် ဈေးသိပ်မကွာလျှင် ပင်တီယမ်ကို ရွေးစေချင်ပါတယ်.. ၀င်းဒိုးအိပ် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆဲဗင်းဖြစ်ဖြစ် သုံးမယ်ဆိုလျှင်တော့ Celeron နဲ့ တင်လို့ အဆင်မပြေပါ… ပင်တီယမ်တောင် 2.0 ကျော်မှ.. Memory လဲ အနည်းဆုံး2GB လိုပါတယ်ခင်ဗျာ… တတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင် ၀င်းဒိုးအိပ်မှာ Office7သုံးမည်ဆိုလျှင် ကီးမလိုသေးပါ.. Office 10 သုံးမှသာ လိုတာပါ.. ဒါပေမဲ့ မပူပါနဲ့ လိုရင်ပြောပါ.. ဟက်နည်း ဟဲ ခိုးနည်းတွေ ပိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ့… ကျွန်တော့်မေးလ်ကို ယူထား အင်ဗိုက်ထားလိုက် မေးချင်တာ လိုချင်တာ တော်တော်များများကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်… အောက်ကပေးထားတဲ့ Lists အတိုင်းနဲ့ ဈေးဆို မဆိုးပါဘူး.. မြန်မာပြည်ထက် သက်သာမယ်ထင်ပါတယ်.. ၀င်းဒိုးက Original License ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.. နိုင်ငံခြားမှာတော့ အော်ရီချင်နယ်လိုင်စင်နဲ့ ရောင်းမယ် ထင်ပါတယ်.. အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ…
password cracker ရယ်
ဟီး… တော်ပြီလား… နီကိုလပ်စ်… ဘယ်ဟာအတွက်ဆိုတာ တိတိကျကျပြောပေးပါလား.. Password Cracker ကို… ဒါမှမဟုတ် မေးလ်ကို အင်ဗိုက်လိုက်… muli.htut@gmail.com ကို.. စကားပြောကြတာပေါ့… ကူညီနိုင်တာဆို လင့်ရှာပေးမယ်.. ကိုယ်ပိုင်လင့်ကတော့ ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ နေသရွေ့ လက်လျှော့လိုက်ပြီ…
i5 ကို.. ၇ရာဆိုတော့… မတန်လား..။
အသိမမှားရင်.. လက်ပ်တော့တွေထဲ..IBM ရဲ့နည်းပညာရထားတဲ့..Lenovo က..သိသိသာသာကောင်းတယ်..။
Lenovo Yoga 11S (MultiTouch) – 59403796 – Silver Gray
4th Generation Intel Core i5-4210Y Processor (1.50GHz 1333MHz 3MB)
11.6″ HD LED Multitouch (1366×768)
အိုင်ဘီအမ်… အမွေရထားတဲ့ လီနိုဘိုကို ကွန်ဇူးမားဗားရှင်းတောင်မဟုတ်….
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်းမှာ အဲဒီဝက်အူတွေ သောက်သုံးမကျလို့…
ဂလိုဘယ် ကပ်စတမ်မှာဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်….
အခု လီနိုဘိုနဲ့ အီးမေးလ်းစစ်ဖြစ်နေကြောင်း….
လိုချင်ရင် သောက်သုံးမကျလို့ မကျိုးမကြေဘဲ အရင်းကကျွတ်ထွက်တဲ့ပုံတွေတင်ပေးရမလား….
အောက်က သင့်ခ်ပက်ဆိုတဲ့စာလုံးကြီးမှ အားမနာ သောက်သုံးမကျတဲ့ လီနိုဘို….
ခညားကို စပ္ပလိုင်းလုပ်တာ ချီးနား စက်ရုံက ထုတ်တာတေကိုး
အူးလေးရဲ့ နာဆာက ပုဂ္ဂိုလ်ဒွေနဲ့ ဖော်မြူလာဝမ်းက ဆြာတွေကိုတော့
ဘယ်စက်ရုံထုတ်တွေ စပ္ပလိုင်းတယ် မဆိုနိုင်
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ကျော်လည်း လီနော်ဗို မကြိုက်
(သုမနကျောမှာ အရှိုးရာတွေချည်းရယ်….. အားဟိ)
ကီးဘုတ်ပေါ်ပါနေတဲ့ trackball အနီလေး ကိုက လူကို ပြောင်ပြနေသလို
ဒါဆို ဂီဂီနဲ့ ဖက်ဖက်နဲ့က သင့်ပက်တွေ သုံးနေတာကိုး… သင့်ပက်ပါဆို ကိုယ့်ကို ပြန်ပက်မှာပေါ့…
ThinkPad Series က အောက်တယ် မဟုတ်ပါဘူးကွယ်..
Yoga, Twist, Helix တွေလည်းပဲ ThinkPad အမျိုး အနွယ်တွေပါ
(အဲ့ကောင်တွေမှာလည်း TrackPoint ပါဝင်ပါတယ်။)
Series တွေအကြောင်းက ဂလိုပါ ။ တချို့ Series တွေက Business, တချို့က performance, တချို့ portabality
တချို့ Price တချို့ကျ customized feature တချို့ကျတော့ Robust အဲ့လိုတွေနဲ့ ခွဲပါသဗျ။
အဲ့ပစ္စည်း အနီစက်ကလေးက အိုင်ဘီအမ် ပေးတန့် ပါ…။
သူ့ရဲ့ ထရစ်ဒစ်ရှင်နယ် ထရိတ်မာ့ခ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက အဲ့ဒါလေးသုံးရင် ညာဘက် လက်ညှိုးနဲ့ သုံးတာခည..
သည်တော့ left-click ကို ညာ right-click ကို ညာဘက်လက်ခလယ် နဲ့ သုံးရတယ်..
(အဲ့ကလစ်၂ခု သီးခြားထည့်ပေးရတယ်) အဲ့၂ခုကြားမှာလည်း scroll လုပ်ဖို့ လည်း ခလုပ်တခုထပ်ဖြည့်ပေးထားသေးတယ်
သည်တော့ အနှီ လက်ပတော့ တွေကိုကြည့်ရင် Track Pad ရဲ့ အပေါ်နဲ့အောက်မှာ
left & right click ၂စုံစီ ပါဝင်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ မကြိုက်တာက အဲ့လို ခလုပ်၂စုံ ဖြစ်နေတာကို မကြိုက်တာ
ဟိုပန်းသီး ကြိုက်သူကြီးလည်း အဲ့ဒါကို မကြိုက်ဘူးလေ…
ကျုပ်မှာတော့.. ၀က်အူလေးတွေစီပြီး.. ကွာခြားချက်.. မိတင်မှာတောင်.. ရှင်းပြလိုက်သေး..
ကိုယ်တိုင်သုံးကတော့… Dell မှ.. Mr Dell ပဲ..။Dell တောင်.. Refurbished မှဝယ်ထားတယ်..။
အချိန်တန်.. လွှင့်ပစ်…။ ပေါပေါပဲပဲ..
(ဒီခေတ်.. လက်ပတော့တလုံး.. ၃နှစ်သုံးလို့ရောဖြစ်သေးလို့လားတောင်ထင်မိနေတယ်..)
အမေရိကန်ဘလူး အိုင်ဘီအမ်ရဲ့အဲဒီကီးဘုတ်က..အစေ့လေးကြောင့်.. ဂျပန်မှာနေတုံး.. အေးအေးရာသီမှာ…အသုံးများသွားတာ.လက်က,အကြောကပ်တောင်သွားသဗျ..
တရက်.. ၁၄နာရီလောက်ဆက်တိုက်သာသုံး.. လက်မကပ်.. ဘယ်ခံမလည်း..
ဒဲ က မာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အခုရုံးက ဖော်ရင်နာတွေက ဒဲ ၀ယ်ပေးရင် မကြိုက်လို့ ပြန်လဲပေးရတယ်… တယောက်က HP… တယောက်က Lenovo …
Think Pad သုံးမိလို့ ဖြစ်မှာပါ.. အဲဒါ နည်းနည်း မော်ဒယ် နိမ့်နေသလားလို့… အခုဆို Idea Pad တို့ Flex စီးရီးတွေ ထွက်နေပြီလေ… လဲပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ… အိုကေမှာပါ…
ဂျပန်ကဆိုတာက.. လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ်၂၀လောက်က အဖြစ်ပြောပြတာပါ…။ အဲဒီတုံးက အဲဒီအစေ့နဲ့မောက်စ်ပဲရှိတာလေ..။
ကျုပ်ဆီမှာ အခုထိ.. X31 ၂လုံး စားပွဲဘေးအောက်မှာရှိနေတုံးဗျ..။
ebay မှာတင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီး.. မအားလို့ရယ်.. နှမြောလို့ရယ်..။
အိုင်ဘီအမ် သင်ခ့်ပက်ကို.. ရုံးမှာ ဖိုင်ဆာဗာအနေနဲ့.. လင်းနပ်စ်ထည့်ပြီး.. ၅နှစ်လောက်တောက်လျှောက်ဖွင့်သုံးခဲ့ဖူးတယ်..။ အင်မတန်.. မာ..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ဒဲလ်က.. ပေါပေါပဲပဲ.. အပျော့စားစာရင်းဝင်မယ်..။ အိပ်ခ်ျပီက.. ပိုမာ။ပိုကောင်းဟန်ရှိ..။
တန်လား မတန်လားဆိုတာကတော့ တဂျီးရဲ့.. ဒီမှာလဲ အဲဈေးလောက်ပဲဗျ… တခုပဲ ဒီက ဖြန့်ချီတဲ့သူတွေမှာ ဒါမျိုးအလုံးတွေ သိပ်မကိုင်ထားဘူး.. ဟိုမှာက များများကိုင်ထားမယ် ဒါပဲ… Lenovo ကတော့ နဂိုကြိုက်တာ.. ဖက်ရှင်ကျတယ်… Dell တော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး.. အခုဆို Wireless Error ခဏခဏတက်လို့…
ဘာကောင်းလို့ ညာကောင်းလို့ရယ် မဟုတ်ဘူး။
လက်ပ်တော့ပ် ဒီဇိုင်းတွေက မိုက်သလားလို့
ရုံးမှာလဲ HP elitebook တွေ ပဲ သုံးကြတယ် တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျ သုံးရတာ
အိမ်မှာ ကျတော့ HP ကို ကြိုက်တယ် ဆိုတာက သူက entertainment အတွက် ကောင်းသလားလို့ ဒီဇိုင်းရော အသံတွေ ဘာတွေ ရော….
ရုံးက ဆရာကြီးကတော့ HP Sleek သုံးတယ်… အပါးပေါ့…
ကျနော် hp လိုချင်တာ။ လက်ရှိ lenovo က
စာရိုက်ရတာ လက်တောင် တုန်နေသလိုလို. . .
hp များကျတော့ ကျစ်နေတာပဲ။
hp တစ်လုံးလောက် ကောက်ရမလား
ဟုတ်တယ် ဆက်ဆက်… ကီးဘုတ်က နဲနဲတော့ Comfort မဖြစ်ဘူး…